Xplora X5 Ku cayaar smartwatch-yada yaryar | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 02/04/2021 16:00 | La cusbooneysiiyay 27/03/2021 18:32 | General, Reviews
Tiknoolajiyada moobiilka iyo casriga, ama taleefannada casriga ah ama nooc kasta oo qalab ku xiran ah, waa wax xubnaha ugu da'da yar ee qoyska xiriir la leeyihiin tan iyo markii la aasaasay, hase yeeshee, weli waxaa jira aalado taxane ah sida wearables kuwaas oo bixiya waxqabadyo xiiso leh oo ku saabsan dhinacan taas oo laga yaabo inaan siinno xoogaa caan ah.
Aynu eegno sida Ciyaaryahankan 'X5 Play' uu gacan uga geysan karo keenista xorriyadda iyo nabadgelyada carruurta yaryar ee guriga ku jirta, iyo sida uu uga faa'iideysan karo howlaheeda shaqo maalinba maalinta ka dambeysa.
Sida munaasabado kale oo badan, waxaan go'aansanay inaan lasocno falanqaynta qotoda dheer ee fiidiyoow kanaalkayaga YouTube kaas oo aan kugu baran doono inaad sanduuqa xirto si aad u hubiso waxyaabaha sanduuqa ku jira iyo sida qalabku ugu dhow yahay, maadaama iyo sidoo kale cashar yar oo aan ku tusi doono sida aad u qaabeyn karto taada Xplora X5 Ciyaar inaad u diyaar garowdo markaad siiso kuwa yaryar ee guriga jooga. Ka faa'iideyso fursad aad ku qorto kanaalkayaga oo aad noo dhaafto wixii su'aalo ah sanduuqa faallooyinka.
3 Isgaarsiinta iyo deegaanka
4 Goplay: Ka dhig mid dhaqaaq leh
Sida badeecad loogu talagalay wiilasha iyo gabdhaha inay tahay, waxaan u aragnaa caag caag ah inuu yahay astaamaha ugu muhiimsan. Tani waxay ku fiicnaan doontaa laba sababood, tan hore waxay tahay inay ka hortageyso kuwa yaryar inay ku waxyeeloobaan nafsadooda, si la mid ah waxay ka dhigeysaa badeecad si gaar ah u adkeysata. Asal ahaan, aaladda waxaa lagu bixiyaa midab madow, inkasta oo aan dooran karno goynta la socota inta u dhaxeysa buluug, casaan iyo madow, iyo sidoo kale faahfaahin kale oo yar yar oo ku saabsan suunka silikoonka ay ku jiraan oo ay fududahay in la beddelo.
Cabirrada: X x 48,5 45 15 mm
Miisaanka: Gram 54
Midabada: Madow, casaan iyo buluug
Waa u fudud tahay dhallaanka culeyska wadartoodu tahay 54 garaam oo keliya, in kasta oo cabbirka sanduuqa iyo cabbirkiisa guud ay u muuqan karaan si weyn. Waxaan sidoo kale haynaa shahaado IP68 ah oo damaanad qaadi doonta inay quusin karaan, buufin karaan iyo inbadan oo dheeraad ah iyadoon laga baqaynin inay jabiyaan Sida iska cad, Xplora iyo dammaanad qaadkeedu ma daryeelo waxyeellada biyaha, in kasta oo aysan tani noqon wax dhibaato ah.
Gudaha saacaddan xiisaha leh ee processor-ku ku dhuumanayo Qualcomm 8909W u heellan dharka la gashado, oo ku shaqeeya nooc nooc ah Android iyo la suurtagalnimada helitaanka 4G iyo shabakadaha 3G mahadsanid booska kaarka SIM-ka ee kujira aaladda. Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal 4GB awoodda kaydinta ah, In kasta oo aanaan hayn xog gaar ah oo ku saabsan RAM-ka, haddana waxaan ku qiyaaseynaa waxqabadka shaqooyinkiisa inay guri dhigan doonto ilaa 1GB. Arrintaan wax cabashooyin ah kamaanaan qabin, sida aad ku aragtay fiidiyowga.
Cabbirka shaashadda: 1,4 inches
Xallinta bandhig: 240 x 240 pixels
Muuqaal isku dhafan 2MP
Batariga waxaan heysanaa 800 Mah oo wadar ah oo bixin doona maalin isticmaalka caadiga ah hadaan dhaqaajino howlaha aasaasiga ah. Si kastaba ha noqotee, qalabka oo leh qaab-istaag ah wuxuu awoodi doonaa inuu na siiyo seddex maalmood oo isticmaalka ah sida ku xusan tijaabooyinkayaga.
Isgaarsiinta iyo deegaanka
Saacaddu waxay leedahay nidaam GPS isku dhafan oo ay taageerayaan isku xirnaanta xogta moobiilka, tan iyo adeegsiga barnaamijka loogu talagalay Android iyo iOS. Goobta canugga waxaa lagu soo bandhigi doonaa waqtiga dhabta ah, xitaa waxaan haysannaa suurtagal in la dhiso - Goobaha Nabdoon », meelaha shaqsi ahaaneed qaarkood ee soo saari doona ogeysiisyada taleefanka marka isticmaalaha uu galo ama ka baxo.
Qaybtani waxay si toos ah ugu xidhan tahay isgaadhsiinta, sidaan soo sheegnayba, saacadani gebi ahaanba way madax bannaan tahay oo haddaan u xilsaarno kaarka sim Cid kasta oo xog haysa oo wicitaan u yeerta waxay noo oggolaaneysaa inaan la xiriirno midka yar si fudud oo ammaan ah. Waxaan ku dari karnaa ugu badnaan 50 xiriiro idman oo aad kula xiriiri karto wicitaanada shaashadda taabashadaada. Sida iska cad waxaan sidoo kale ka akhrisan karnaa fariimaha qoraalka ah iyo emojisyada shaqsiyeed ee loo yaqaan 'X5 Play'.
Codsigu wuxuu umuuqday mid si gaar ah u guulaystay, waxqabadka waa mid dareera oo si sax ah loogu dhexwarey nidaamyada kaladuwan ee kaladuwan, in kastoo aan ku helney waxoogaa waxoogaa sareeya waxqabadka iOS. Shaki la'aan waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee qalabkan loo helo, maadaama ay tahay xarunta neerfaha inkasta oo saacaddu ay madax bannaan tahay.
Goplay: Ka dhig mid dhaqaaq leh
Xplora waxaa ku jira jiilkeedii ugu dambeeyay ee daawanaya madal waxqabad loo yaqaan Ciyaar. Nidaamkan diiwaangelinta iyo waxqabadyada waxaa lagu abaalmariyay Yurub, iyada oo si gaar ah loo qiimeeyay iyada oo loo mahadcelinayo wada shaqeynta uu la leeyahay Sony PlayStation. Kuwa yar yar waxay awoodi doonaan inay fuliyaan caqabadahooda sidaasna ay ku kasbadaan abaalmarinta.
Xplora App ee macruufka.
Xplora App ee loogu talagalay Android.
Tani waxay ka caawin doontaa iyaga, illaa iyo inta aan ka caawineyno hawsha oo ay soo dhaweynayaan waxqabadka, si loola dagaallamo fadhiidnimada.
Gaar ahaan xiisaha leh waa xaqiiqda in saacadda ay ku jirto kamarad 2MP ah, Tani waxay u oggolaan doontaa cunugga inuu sawirro xiiso leh ka qaado adigana, adoo maraya kontoroolka fog, sidoo kale xoogaa tallaalo ah
Xakamaynta Waalidiinta waxay leedahay booska ugu sarreeya dhammaan softiweerka ay kujirto qalabka waana mid aad muhiim u ah. Saacaddani waxay u adeegtaa carruurta yar yar oo ah habka ugu horreeya ee loo xirxiro dharka, si la mid ah sida ay noo oggolaadaan inaan si adag ula soconno dhaqdhaqaaqyadooda, labadaba xagga nabadgelyada iyo markay tahay la dagaallanka qaab-nololeedka deggan ee carruurta, aafo muhiim u ah xilliyada orod. Way cadahay in taariikhaha, Ciyaartaan 'X5 Play' waxaa loo taagay inay tahay shey si gaar ah xiisaha u leh wadaagista, iyadoo la tixgelinayo da'da kala duwan ee badeecada iyo astaamaha la bixiyo.
Waxaan hadda ka hadleynaa waxa muhiimka ah, Xplora X5 Ciyaar waxaa laga iibsan karaa waxay leedahay degel sumadeed laga bilaabo 169,99 euro, qiimo dhexdhexaad dhexdhexaad ah la siiyay astaamaha la bixiyay.
Ku dhejiyay: 2 April 2021
Codsiga Xplora waa mid aad u wanaagsan
Sifiican ayaa looga fikiray xakameynta waalidka
Cabbir ahaan xoogaa yar
Ma aha wax fudud in la dejiyo
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Xplora X5 Ku ciyaar smartwatch-ka kuwa yaryar